HIM | Health in Myanmar » 2011 » January
New webpage on HIV in Burma
Watch this space. Though there is nothing specifically about HIV on it yet, there may be in the future.
လှဝင်းရီ အပိုင်း (၁၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅)
တခုသော နွေဦးကာလ ကျွန်ုပ် အိမ်သို့ ပြန်ရောက်ခိုက်တွင် “လှဝင်းရီတယောက် စပါးပွဲစား ဦးစံသိန်း နှင့် တိတ်တိတ်ပုန်း ညားနေပြီ” ဟူသည့် သတင်း သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရ၏။ ထိုသတင်းကို ကြားရသော် ဒီသေခါနီး အဖိုးကြီး ဟာလေ ဟု ကျွန်ုပ် ရေရွတ်မိသည်။ အချို့က ဦးစံသိန်းက လှဝင်းရီကို အမိဖမ်း လိုက်တယ် ဟု ဆို၏။ အချို့မူကား ဒီ ကောင်မက အဖိုးကြီးကို အပိုင်ဖမ်းလိုက်တာ ဟု အမနာပ ဆို ၏။ မည်သူ မည်ဝါ မှားသည်။ မှန်သည်ကို ဝေဖန်လျှင် ဆုံးတော့မည် မဟုတ်။ အဖိုးကြီး လှဝင်းရီကို မယားမှတ်မှတ် သားမှတ်မှတ်နဲ့ ထောက်ပံ့ ပေါင်းသင်းရင် တော်လှပြီ ဟုသာ သဘောထားလိုက် သည်။
ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ ကူးစက်နှုန်း ကျဆင်းလာဟုဆို
၂၀၀၆ မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အထိရေးဆွဲထားသည့် အမျိုးသားမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (National Strategic plan) ၏ ထုတ်ပြန်သောစရင်းများအရ အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း လူငယ်များတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း ၁ ဒသမ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁ ဒသမ ၂၆ ရာခိုင်နှုန်းထိကျဆင်းလာကြောင်း UNAIDS (ယူအင်န်အေ့စ်) မှ သိရသည်။
လှဝင်းရီ အပိုင်း (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)
“အံ့ပါရဲ့တော် တနေကုန် တနေခန်း ကိုးကျင်းကိုးကြောင်း လျှောက်သွားနေတာ နင် လှဝင်းရီ အ ကြောင်း မကြားလိုက်ဘူးလား” ဟု အမကြီးက ဆိုပြန်သည်။ ”လှဝင်းရီ ဗလက္ကာရ အလုပ်ခံရလို့တဲ့၊ လုပ်တဲ့အကောင်ကိုလဲ ရဲတွေ ဖမ်းထားပြီတဲ့။ အဲဒီ မသာကောင်ကို ထောင်ချ မနေနဲ့။ အလကား ဆန်ကုန်တယ်။ တခါထဲ သေအောင် ရိုက်သတ်ရမယ်။ ဓားနဲ့ နုပ်နုပ်စင်းပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ” ဟူသည့် သူ့ စကားသံ အဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်၏ ခေါင်းထဲတွင် မိုက်ခနဲ ဖြစ်သွား၏။ ရင်တဒိတ်ဒိတ် ခုန်လာ ၏။ သွေးများ ဆူပွက်လာသည်။ ဂယောင်ချောက်ချား ဖြစ်သွားသည်။ ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ တော့။ ဘာကိုမျှ နောက်ထပ် မကြားလိုတော့။
Information about care in the north
The headline of this article makes the [him] moderator smile. Bogyoke Aung San has been gone for over sixty years. The journalist must mean his daughter. … But seriously, it is good to be reminded of care initiatives outside of main cities.
Inappropriate use of antiretroviral medications
There is stillaneed for general practitioner training. But ifapatient living with HIV does not have enough money the general practitioner is going to give one or two antiretroviral medications anyway. One or two drugs are insufficient in this era of three drug regimens. The doctor who prescribed the most insufficient therapy in Rangoonacouple of years ago wasaspecialist!
အေအာရ်တီဆေး ယဉ်ပါးမှုမဖြစ်ရန် အရေးကြီး
“တချို့ဆေးခန်းတွေမှာ အေအာရ်တီကို ဒီတိုင်းပေးနေတယ်။ လူနာအတွက် အရမ်းအန္တရာယ် များပါ တယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဖြစ်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ဒီရောဂါ အကြောင်း သေချာဗဟုသုတရှိတဲ့ ဆရာ ၀န်ကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီရှိသူများ အတွက် ဆေးခန်းလမ်းညွှန်
တချို့က လူသိမခံဘဲ အသေသာခံသွားတော့မည်ဟု တွေးမိခဲ့ကြသည်။ တချို့က ကြားဖူးနားဝ တိုင်းရင်းဆေးများနှင့် ကုသခြင်းတို့ဖြင့် ငွေကုန်လူပန်းဖြစ်ကာ အကျိုးမရှိ အချိန်ကုန် နေတတ်ခဲ့ ကြပြန်သည်ဟု ဆိုသည်။
သို့ဖြစ်၍ ဤရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရပြီဆိုသည်နှင့် တတ်ယောင်ကား ကြိတ်ကုနေမည့် အစား တတ်ကျွမ်းသူ ဆရာဝန်များ ရှိရာသို့ အမြန်ဆုံး သွားရောက်ကာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး၊ အကြံဉာဏ် ယူသင့်ကြောင်း အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး ကိုယ်တိုင် ခံစားနေကြရသူများက ပြောသည်။
မတားဆီးနုိုင်သေးသော ခုခံအားကျရောဂါ နှင့် အနာဂါတ်အလားအလာ
အိပ်ခ်ျအုိုင်ဗွီ ပုိုး ကူးစက်ခံထားရသော သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကြောင့် ဤဆောင်းပါးကုို ရေးရန် ဆန္ဒဖြစ် ပေါ်လာခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းသည် ဆေးဘက်ဆုိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန် တစ်ဦးဖြစ် သော်လည်း အသက် ၂၆ နှစ် ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး မကြာမီတွင် အိပ်ခ်ျအုိုင်ဗွီပုိုး ကုို ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် အသက် (၁၂) ခန့် အရွယ် လူပျိုဖေါ်ဝင်ချိန်မှ စတင်ကာ လိင်တူကုိုသာ စိတ်ဝင်စား ခဲ့သည် ဟု ဆုိုသည်။ သူ၏ ပြောပြချက်များကုို အခြေပြုပြီး မြန်မာစာဖတ်သူများ မသိသေးသော အချက်များ ဆက်လက် ပေါ် ထွက်နေသည်ဟု ယူဆသဖြင့် ဤဆောင်းပါးတွင် တတ်နုိုင်သမျှ လုိုအပ်သော အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းဖြည့်စွက် ထားပါသည်။
Michael Kirby on sex work in Asia
Moses has spoken. From standing onachair in Pattaya. Here are the ten commandments of Kirby.
Methadone ဘိန်းကို ဘိန်းနဲ့ ဖြတ်တယ်
The ICAAP is coming up
The ICAAP is coming late summer and the website is up.